Ọtụtụ n'ime anyị na-amasị ibudata fim ma ọ bụ vidiyo si na mmiri iyi. Mgbe ụfọdụ, anyị nwere ike ibudata onye na atọ ụdị nke faịlụ na ya.
Nke a bụ ndekọ Ọdịdị maka a DVD nkiri. Ma eleghị anya, ị na-amaghị ihe ụdị format ọ bụ na gị mgbasa ozi ọkpụkpọ bụ enweghị ike na-egwu ya. Ọ bụ nnọọ manụ ịchọ ihe ngwọta na ma obodo ma ọ bụ forums dị nnọọ ka a mwute laghachi na results na bụghị otú ahụ bara uru. Ò nwetụla mgbe ị nwere ahụmahụ dị otú? Isiokwu a bụ kpọmkwem maka unu, na-akọwa ihe VIDEO_TS faịlụ ndị na zuru ezu ma jiri ndidi-eduzi gị na otú na-egwu VIDEO_TS faịlụ na kọmputa gị were were.
Ngwọta 1: tọghata VIDEO_TS Ndị Ọzọ Formats ma ọ bụ DVD na Wondershare Video Converter Ultimate
Ngwọta 2: tọghata VIDEO_TS Ndị Ọzọ Formats ma ọ bụ DVD na free online Video Ntụgharị
Ngwọta 3: Iji VIDEO_TS Player
Gịnị bụ VIDEO_TS?
Ngwọta 1: tọghata VIDEO_TS Ndị Ọzọ Formats ma ọ bụ DVD
M ka nwere ike chetara nke ajụjụ jụrụ onye ọrụ na a Forum; "M na-ebudatara na-akpọ a VIDEO_TS faịlụ. Mgbe m okpukpu abụọ pịa ya, ọ na-eweta elu nza nke ọzọ VIDEO_TS faịlụ. Apụghị m egwu ha ma ọ bụ tọghata ha nke mere na ha naanị otu faịlụ. Na m na-eme n'ezie dị ka interface nke onwe m ọkpụkpọ, otú ahụ ka m na-achọghị ka ibudata ndị ọzọ. Onye ọ bụla aka? "
Yiri nke a onye ọrụ query; ọ bụrụ na ị na-achọ iji tọghata gị VIDEO_TS faịlụ ka a dakọtara usoro maka playback on gị ugbu a ọkpụkpọ, ị nwere ike na-agbalị Video Ntụgharị (Video Converter Ultimate for Mac). N'ihi na Windows Media Player, dị nnọọ tọghata VIDEO_TS ka WMV. Dị ka QuickTime, na MOV faịlụ ụdị na-atụ aro. The VIDEO_TS nchekwa ọdịnaya nwekwara ike ọkụ jidesie a DVD na mgbe ahụ na-egwuri ọ bụla DVD ọkpụkpọ. Ya mere, converting a VIDEO_TS faịlụ jidesie a DVD bụghị a ọjọọ echiche afterall ma ọ bụrụ na ị chọrọ igwu ya na DVD egwuregwu na ala ụgbọ ala gị ma ọ bụ ime.
Nzọụkwụ 1: Mgbe na-agba ọsọ ya, dị nnọọ aga tọghata 's tab> Ibu Ibu DVD> Ibu Ibu DVD nchekwa mbubata gị VIDEO_TS faịlụ.
Nzọụkwụ 2: Mepee mmepụta format ndepụta iji họrọ gị chọrọ format, dị ka WMV, MOV, DVD na wdg
Nzọụkwụ 3: tọghata VIDEO_TS faịlụ site ọkụkụ tọghata button na ala-nri akuku nke ngwa a.
Ebe a bụ a ngwa ngwa ụzọ nweta ihe mgbaru ọsọ na-enweghị wụnye ihe ọ bụla. Gbalịa a free online video Ntụgharị ugbu a.
Ị nwere ike mfe playback gị VIDEO_TS faịlụ bụrụ na ị nwere VIDEO_TS ọkpụkpọ arụnyere. The Wondershare Player ga-abụ otu gị ọzọ. Ọ na-akwado fọrọ nke nta niile nke video ma ọ bụ ọdịyo formats, gụnyere VIDEO_TS usoro. Na ya, ị nwere ike igwu niile media faịlụ na naanị otu ike media ọkpụkpọ. Ugbu a ibudata a ọkpụkpọ na-eso nzọụkwụ n'okpuru na-egwu gị VIDEO_TS faịlụ.
Nzọụkwụ 1: Mgbe echichi, ẹkedori Wondershare Player.
Nzọụkwụ 2 (nhọrọ): Press F5 ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịgbanwe ndabara ntọala.
Nzọụkwụ 3: Site isi menu, pịa File> Open File. Mgbe ahụ na-emeghe ndekọ iji họrọ lekwasịrị VIDEO_TS nchekwa, na iti OK.
A VIDEO_TS faịlụ bụ a DVD nchekwa faịlụ, tumadi nwere niile data maka DVD nkiri. Ọ kpam kpam dere atọ iche iche nke faịlụ n'ime: VIDEO_TS.IFO, VIDEO_TS.BUP, na VIDEO_TS.VOB.
VIDEO_TS.IFO -ndị nhazi faịlụ na ozi dị ka menus, ndepụta okwu, akụkụ ruru, asụsụ wdg
VIDEO_TS.BUP - nkwado ndabere na mpaghara mbipụta nke nhazi faịlụ
VIDEO_TS.VOB - n'ezie video na ọdịyo data maka DVD ọdịnaya
Rịba ama:-emekarị, ọrụ nwere ike inwe nza VOB faịlụ mgbe ha tọghata a DVD faịlụ na-achọ iji tọghata ndị ọzọ formats maka ojiji. Lee otú e si tọghata VOB ka MP4.
Olee otú iji tọghata Video_TS ka AVI na Mac / Win (Windows 10 gụnyere)
Olee otú igwu egwu m2ts na xbmc
Olee otú Download YouTube Videos ka Windows Movie Onye kere
Olee otú weghara, Record, Download na Save gụgharia Audio ma ọ bụ Music maka Free
> Resource> tọghata> Olee otú iji Play VIDEO_TS faịlụ